Zon'olombelona · Febroary, 2021 · Global Voices teny Malagasy
Zon'olombelona · Febroary, 2021
Tantara mikasika ny Zon'olombelona tamin'ny Febroary, 2021
Azia Atsinanana 28 Febroary 2021
Inoan'ireo mpikatroka mpandala ny demokrasia fa ny rafitry ny banky dia ampiasan'ny polisin'ny fiarovam-pirenena hamoretana ireo mpikatroka sy ONG mpanohana ny demokrasia.
Antenain'ilay taranja PS 21 vaovao ny ho sehatra iray fanairana ny “fahatongavan-tsain” 'ny taranaka Filipina aty aoriana ny amin'ny maha-zava-dehibe ny zon'olombelona, ny rariny ara-tsosialy ary ny fitohizan'ny tolona ho an'ny tena fahalalahana sy ny demokrasia.
Azia Atsimo 21 Febroary 2021
"Tokony hosamborin'ny governemanta ireo nandrava ny Tempoly sy ny sekoly, tsy misy olona manan-jo hamotika toeram-pivavahana hafa."
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 19 Febroary 2021
Azia Atsinanana 18 Febroary 2021
Fitantanam-pitondrana 13 Febroary 2021
Tsy naharaka ny fandefasana mivantana ny resadresaka tao amin'ny Global Voices Insights nifanaovana tamin'ny mpanoratra sady mpikatroka Jillian C. York? Indro ny famerenana azy.
Afrika Mainty 12 Febroary 2021
Voasambotra noho ny siokany momba ny polisy voalaza fa nidaroka nahafaty zazakely iray rehefa nampihatra ny fepetran'ny COVID-19 i Hopewell Chin'ono, Job Sikhala ary Fadzai Mahere.
Azia Atsinanana 12 Febroary 2021
Fisamborana faobe, fibahanana tranonkala aterineto, fahataperan'ny fahalalàhan'ny fitsaràna, ankoatra ny zavatra hafa, no toa manangasanga ao Hong Kong ho an'ity taona ity.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 11 Febroary 2021
Tsindry tsy mahazatra avy any Etazonia no heverina ho nitarika ho amin'ny famahana haingana ny raharaha Dr Fitaihi, izay nosamborina, nampijaliana ary noraràna tsy mahazo mandeha lavitra hatramin'ny taona 2017.